Yan Aung: အလွမ်းသင့်ဒိုင်ယာရီ...
တစ်ခါတလေတော့လည်း ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကင်ပြာမှာ ပြေးချင်တိုင်းပြေးနေတဲ့ တိမ်လွှာဖြူဖြူလေးတွေကို ငေးကြည့်ရင်း စိတ်ကူးတွေ ပျံ့လွင့်နေမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကလေးတွေမှပဲ တိမ်တွေကို အကန့်အသတ်မဲ့ ငေးကြည့်ခွင့် ရထားတာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်ဆို ငေးကြည့်ဖြစ်ဖို့ စိတ်လေးရယ်၊ ငေးကြည့်ဖြစ်ဖို့ အချိန်လေးရယ်ပဲ လိုတာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ငယ်ချင်လားမေးတော့လည်း အဖြေက မရေမရာ။ စာတွေပြန်မကျက်ချင်တော့လို့ မငယ်ချင်တာလည်း မဟုတ်။ အခုချိန်ထိ အလုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စာတွေကို နေ့တိုင်းလိုလို ကျက်မှတ်နေရတာ ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံး။ ပြန်ငယ်ချင်လား၊ မငယ်ချင်တော့ဘူးလား။ မှားယွင်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှားတစ်ချို့ကို ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တော့ ငယ်ချင်မိတယ်။ အဲသလို ပြန်ပြင်ခွင့်ရလိုက်ရင်ရော အခုလက်ရှိအနေအထားထက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ နေရာမှာ ရှိနေမှာလား။ Click ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ရီမုတ်ကွန်ထရိုးလေးကို နှိပ်ပြီး အတိတ်ကို ပြန်သွား၊ ပြင်ချင်တာတွေ သွားပြင်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလာဒ်တွေရအောင် လုပ်ယူချင်မိသလား။ အဲလိုမျိုး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်ရနေရင်လည်း ဘဝဆိုတာ အခက်အခဲတွေ၊ အမှားအယွင်းတွေ နည်းလွန်းလို့ ဆားမပါတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်လို ပေါ့ချွတ်ချွတ် ဖြစ်နေလောက်တယ်။ တကယ်တော့ ကျရှုံးခြင်းတွေ၊ နာကျင်ခံခက်ဖြစ်ရခြင်းတွေက အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဝမ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်ရခြင်းတွေအတွက် အဖြည့်ခံတွေလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်၊ တွန်းအားတွေလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ မငယ်ချင်ပါဘူး။ အချိန်တွေကိုတော့ ပြန်လိုချင်မိတယ်။ နည်းနည်းတော့ အမြီးအမောက်မတည့်သလိုပဲ။ အဟတ်။ အဲသလို ရယ်ချလိုက်တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်း။
ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ။ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် အချိန်တွေ ပိုထွက်လာပြီး ကုန်ကြမ်းတွေပိုရလာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ၊ တစ်ပတ်တစ်ခါ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး အတွေးလေးတွေကို ကွန့်မြူးလို့ စာလေးတွေ ရေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးတွေ၊ တောင်တန်းဒေသတွေကို စိတ်ရှိတိုင်း ခရီးထွက်လို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ရင်း ဒေသန္တရ ဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခပ်တိုးတိုး ရင်ခုန်သံလေးတွေ။ ဒါတွေအားလုံးက လေယာဉ်ကွင်းက ဆင်းလို့ နောက်တစ်နေ့မနက် အလုပ်ထဲ ရောက်တဲ့အချိန်ကတည်းက ပြေးထွက်သွားလိုက်တာ မျက်ခြည်ကိုပြတ်လို့။ ဩော် မယုံနိုင်စရာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်နှစ်နဲ့ ရှစ်လတောင် နေဖြစ်ခဲ့လိုက်တယ်။
သည်နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်လို့ လေယာဉ်ကွင်းက စထွက်လိုက်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်ကျော်လောက်က အိပ်မက်တွေ တပုံကြီးနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ဖူးတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ပြေးမြင်မိတယ်။ ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲ လာလာ ရင်ဆိုင်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ၊ ကိုယ့်ကျောင်းစရိတ်ရဖို့အတွက် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲ လုပ်ရလုပ်ရ လုပ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်ကျည်ပြတ်သားတဲ့ စိတ်တွေ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပညာရေးအတွက် ဘယ်လိုအတားအဆီးနဲ့ပဲ ကြုံကြုံ ထိုးဖောက်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ။
လူငယ်တစ်ယောက်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို အကန့်အသတ်မဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသလို အိပ်မက်ပိုင်ခွင့်လည်း ရှိတာပဲ။ တစ်ချို့အရာတွေကို ကြိုမြင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ တစ်ချို့အရာတွေကို မလုပ်ဖြစ်ဘဲ တစ်ချို့အရာတွေကို လုပ်ခဲ့မိမှာပေါ့။ မေ့ပစ်သင့်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ရှိသလို မမေ့သင့်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ တစ်ချို့လည်း ရှိခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ အဲသည့်လူငယ်လေးဟာ အောင်လည်း အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ ရှုံးလည်းရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ တိမ်လွှာဖြူဖြူတွေနောက်ကို ပြေးလိုက်ရင်း လဲကျခဲ့ဖူးသလို တိမ်လွှာဖြူဖြူတွေကို ငေးမောရင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်ဖြည့်တင်းခဲ့ရတယ်။ ဘဝဆိုတာ ခရီးရှည်တစ်ခုပဲလေ။
လေပူတစ်ချို့ကို မှုတ်ထုတ်ရင်း လေယာဉ်ကွင်းထဲက ထွက်လာတော့ ရင်ခုန်သံတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်တုန်းကလောက်တော့ မမြန်တော့တာ သေချာတယ်။ လုပ်သင့်တာတစ်ချို့ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ လုပ်ချင်တာတစ်ချို့ ပြန်လုပ်ဖို့အတွက် ထားသင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး ထားတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးခဲ့ပြီလေ။ မမျှော်လင့်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို မတုန်မလှုပ် ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေ့ကျင့်နေသူတစ်ယောက်အတွက် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေရင်း ကားရထား မှန်ပြတင်းပေါက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ တိုက်တာအဆောက်အအုံတွေ၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြေးလွှားနေတဲ့ ကားတွေ၊ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ အဆက်မပြတ် ပျံဝဲနေတဲ့ လေယာဉ်ပျံတွေကို သည်တိုင်းလေး ငေးကြည့်နေရတာ ပိုပြီးတော့ နေလို့ကောင်းသလို ခံစားရတယ်။
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇင် ရဟန်းတော်နှစ်ပါးရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို သတိရမိတယ်။ ဇင် ရဟန်းတော်နှစ်ပါး ခရီးသွားရင်း လမ်းခုလတ်မှာ ရေစီးသန်တဲ့ မြစ်တစ်စင်းကို တွေ့တယ်။ အဲသည့်မြစ်နားမှာ ဖြတ်ကူးဖို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတဲ့ အင်မတန်မှ ချောမောလှပတဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ကိုလည်း တွေ့တယ်။ မိန်းမပျိုက မြစ်ကို ဖြတ်ကူးဖို့ သူမကို အကူအညီပေးနိုင်မလားလို့ မေးတဲ့အခါ ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဟန်းတော် အကြီးက ဘာမှမပြောဘဲ မိန်းမပျိုကို ထမ်းပိုးလို့ မြစ်တစ်ဖက်ကို ခေါ်သွားပြီး တစ်ဖက်ကမ်းမှာ အသာအယာ ချပေးခဲ့လိုက်တယ်။ ရဟန်းတော်အငယ်ဟာ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး ကသိကအောက် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ၊ နောက် သုံးနာရီလောက် ခရီးဆက်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ ရဟန်းတော်အကြီးကို သူက မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။
“ငါ့ရှင်ဟာ ရဟန်းတရားနဲ့ မညီဘဲ အနှီ မာတုဂါမကို ထမ်းပိုးလုိ့ ကမ်းတစ်ဖက်ကို ပို့ခဲ့တယ်။ အသင့်လုပ်ရပ်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား” တဲ့။
“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်က မာတုဂါမကို သယ်ပိုးပြီးခဲ့လို့ ကမ်းတစ်ဖက်မှာ ချခဲ့ပြီးပါပြီ။ အရှင်ဘုရားက အနှီမာတုဂါမကို အခုထိ သယ်ပိုးနေတုန်းပဲလား” လို့ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ လူသားတွေဟာ အတိတ်က သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ နာကျင်မှုတွေကို လွှတ်မချနိုင်ဘဲ လက်ရှိအချိန်ထိ ဆက်လက်သယ်ယူရင်း ဘဝကို ကြည်ကြည်လင်လင် ရှင်းရှင်းသန့်သန့် နေထိုင်ဖို့ကို မေ့လျော့နေကြတယ်။ အတိတ်ရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ ဇင် တရားတော်လေးကို မှတ်သားမိခဲ့ဖူးတယ်။
တကယ်တော့ အတ်ိတ်ကို လွှတ်ချနိုင်ဖို့အတွက် သတ္တိနဲ့ ဥာဏ်ပညာလိုတယ်ဆိုတာကို အတွေ့အကြုံနဲ့ ရင်းနှီးပြီးမှ သိခဲ့ရတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ပြန်မငယ်ချင်တော့ပါဘူး။ တစ်ချို့အချိန်တွေက ကုန်ဆုံးခဲ့ပေမယ့် အရင်းအနှီးတွေ အဖြစ် ဘဝမှာ ပြန်အရေးပါလာတတ်တယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ ပေးဆပ်မှု မရှိဘဲ ခိုင်မာတဲ့ ဘဝအတွေးအခေါ်တွေ ရလာဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။
နီးစပ်ရာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဖုန်းကဒ်ဝယ်၊ ကိုယ့်နံပါတ်အသစ်ကို မှတ်မိအောင် ချရေးပြီး ဖုန်းစာအုပ်လေးထဲမှာ ရေးမှတ်ထားတဲ့ အရေးကြီးဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကို ဆက်သွယ်လိုက်တယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ပြန်ရောက်ပါပြီ။ လက်ဆောင်တွေလည်း ပါလာခဲ့တယ်။ ဘယ်တော့လောက် တွေ့ရင် အဆင်ပြေမလဲ”
မြေအောက်ခန်းလေးထဲကို ပြန်ဝင်လိုက်တော့ တစ်ချက်ပြုံးမိလိုက်တယ်။ သမိုင်းမှ တစ်ပတ်ပြန်လည်တာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ပတ်ပြန်လည်နေခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခုနဲ့ရယ်ပေါ့။ ဘယ်လိုအလုပ် ပြန်လုပ်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ်မလဲ၊ ဘာတွေကို ဝယ်ရမလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ ရေရှည်နေထိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ခဏဘေးဖယ်လို့ ရေနွေးအိုးလေးတည်ပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက် ဖျော်သောက်နေလိုက်တယ်။
“Well, it’s so good to be here again!”
အခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတစ်ချို့ကို နေသားတကျ ပြန်ထားပြီးတာနဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေးကို ထုတ်လို့ အခန်းသစ်တစ်ခု စရေးလိုက်တယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ မရေးခင် မလုပ်ချင်တာတွေ အရင် ချရေးလိုက်တယ်။
“ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ ကြည့်ပြီး အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး”
“ပိုက်ဆံပဲရပြီး မတိုးတက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုအတွက် အချိန်မကုန်ချင်ဘူး”
မလုပ်ချင်တဲ့ စာရင်းကို ရေးပြီးတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စာမျက်နှာမှာ လုပ်ချင်တဲ့ စာရင်းကို ရေးဖြစ်တယ်။
“လူတွေ မက်မောတမ်းတတဲ့ အရာတွေထက် ကိုယ့်နှလုံးသားက လာတဲ့ အသံကိုပဲ နားထောင်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင်တယ်”
“အွန်လိုင်းမှာ အချိန်ကုန်နေမယ့်အစား လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ လက်တွေ့လူသားတွေနဲ့ ထိစပ်လို့ ဘဝကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ နေသွားချင်တယ်”
“ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာနဲ့ သမ္မာအာဇီဝ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စိတ်ဝင်တစား လုပ်သွားချင်တယ်”
ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဘာတွေပဲလာလာ ဘယ်အရာဟာ လုပ်သင့်ပြီး ဘယ်အရာဟာ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ အဖြေထွက်ပြီးသား ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဘာတွေရချင်တယ်ဆိုတာထက် ဘာတွေပေးနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ ရွှေရောင်စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို အခြေတည်လိုက်တာက ကိစ္စတော်တော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် အညှာတစ်ခု ရလိုက်သလိုပါပဲ။
မြစ်တစ်ခုမှာ ရေနှစ်ခါမချိုးနိုင်ပေမယ့် စီးနေတဲ့ ရေတွေကိုတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ငေးကြည့်နိုင်တယ်။ လူပေါင်းများစွာနဲ့လည်း ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ဖူးပြီ။ ကိုယ့်ကို လှည့်စားသူတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးသလို ကိုယ်က လှည့်စားခဲ့သူတွေရဲ့ ဒဏ်ရာတွေအတွက်လည်း ကိုယ်ချင်းစာမိခဲ့ပြီ။ မသေခင်စပ်ကြားမှာ ဘဝကို အကောင်းဆုံးနေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မိလိုက်ကတည်းက ရရှိခြင်း၊ မရရှိခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ မပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းတွေက သိပ်အရေးမပါတော့သလို ခံစားလာမိခဲ့တယ်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ လုပ်ပေး၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ တစ်ဖက်က ကိုယ့်စေတနာကို သဘောပေါက်ခြင်း၊ မပေါက်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ မတုံ့ပြန်ခြင်းက အရေးမကြီးတော့ဘူး။ သည်လိုနဲ့ပဲ ဘဝကို ကွက်လပ်တွေနဲ့ နေတတ်လာခဲ့တယ်။ ကွက်လပ်တွေ များတာကြောင့်လည်း နားလည်ရခက်သူရယ်လို့ မိတ်ဆွေတစ်ချို့က နောက်ကွယ်မှာ တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုး လုပ်ကြပြန်တယ်။
ဘဝကို အကောင်းဆုံးနေဖို့ နည်းနှစ်ခုကို တွေ့လာမိတယ်။ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် နေဖို့ (သို့မဟုတ်) လူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် မနေဖို့။ ကိုယ်တိုင်လည်း အပြစ်ကင်းသူ တစ်ယောက် မဟုတ်လေတော့ လူတိုင်းမျက်စိထဲမှာတော့ ပန်းသီးတစ်လုံး မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ အတိတ်ကို လွှတ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှတော့ ပစ္စုပ္ပန်ကို ကောင်းကောင်း စူးစိုက်နိုင်ပြီပေါ့။ မသယ်ချင်တော့ဘူး။ ဘဝက တစ်ခါတလေ သိပ်လေးလွန်းတယ်။
တစ်ခါတလေတော့လည်း ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ကမ်းစပ်ကို တဝုန်းဝုန်း ပုတ်ခတ်နေတဲ့ ရေလှိုင်းလေးတွေရယ်၊ နေရောင်အောက်မှာ ဖွာခနဲ ဖြာဆင်းသွားတဲ့ လှိုင်းခေါင်းဖြူလေးတွေရယ်ကို ငေးကြည့်ရင်း စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကလေးတွေမှပဲ ရေလှိုင်းလေးတွေကို အကန့်အသတ်မဲ့ ငေးကြည့်ခွင့် ရထားတာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်ဆို ငေးကြည့်ဖြစ်ဖို့ စိတ်လေးရယ်၊ ငေးကြည့်ဖြစ်ဖို့ အချိန်လေးရယ်ပဲ လိုတာပါ။
~ ရေခဲငှက် ~
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ည ၁၂း၅၈
စာသားလှလှလေးတွေ ဖတ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါကွယ်.... ဘ၀မှာနေတတ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုဟာ အလိုလိုကိုယ်နဲ့ အလှမ်းဝေးသွားတယ်။
ဟေးးး စာတွေ ပြန်ရေးနေပြီပေါ့...
>Ti Tint... မတင့်ဆိုလို့ ရင်တွေဘာတွေတောင် ခုံးသွားတယ်. အက်အက်. သတိတရ စာတွေလာဖတ်နေသေးလို့ ကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ.. တီတင့်လည်း ရေးပါဦး.
>မသက်ဝေဂျီး... ရေးနေ၏။ ရေးနေဆဲ၊ ရေးလတ္တံ့။ ;) တော်ကြာရေးလှချည်လားဆိုပြီး မျက်စိနောက်နေမှာ မြင်ယောင်သေး. :D